Ph.D (Pathology), Dip.Med.Ed
I am very pleased to welcome you to the University of Medicine, Magway. Over eighteen years have passed from the establishment of this University in 2001.
The founding father of the University was Professor Than Myint presided as the first Rector. With the tireless energy and enthusiasm combined with his vision Prof. Htay Hla, the sixth Rector had led so many to design the wonderful buildings and campus.
502 Current Total Staff
267 Current Teaching Staff
235 Current Office Staff
ဆေးတက္ကသိုလ်၊မကွေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ (၇/၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀-ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၂)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အကြိမ် (၂၀)မြောက် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ (၂၁)ရက်နေ့ ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်၊မကွေး မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပွဲ အခမ်းအနား ၈-၇-၂၀၂၀ ( ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ( ၃၀ )ရက်နေ့တွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာတင်ထွန်းသည် ဆေးတက္ကသိုလ်၊မကွေးသို့လာရောက်၍ (၂)ထပ်စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်နေမှုအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်၊မကွေး Management Review for Preliminary Accreditation (QA Workshop) အခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ( ၃ ) ရက်နေ့ (၉:၀၀)နာရီတွင် နှင်းဆီနီ ခန်းမ (C-၂၀၁)၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး ပညာရေးအဖွဲ့၏ (၄/၂၀၂၀) အစည်းအဝေး အခမ်းအနားကို နေ့လည် (၂:၀၀)နာရီတွင် Video Conferencing Room ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်၊မကွေးတွင် ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများအား Certificate ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၂)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Student Management System Software အတွက် တတိယအမ်ဘီဘီအက်စ် ဆရာ/မများအား သင်တန်းပို့ခြင်း ၂၁.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ (အင်္ဂါနေ့)
Student Management System Software အတွက် ဒုတိယအမ်ဘီဘီအက်စ် ဆရာ/မများအား သင်တန်းပို့ခြင်း ၁၇.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ (သောကြာနေ့)
Student Management System Software အတွက် ပထမအမ်ဘီဘီအက်စ် ဆရာ/မများအား သင်တန်းပို့ခြင်း ၁၆.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ (ကြာသပတေးနေ့)
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)၏ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၅)ရက်နေ့တွင် ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်၊မကွေးတွင် "Dissemination Workshop on Assessment Training" Day(2) အခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၀)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
"Myanmar Medical Resource Center" online web postal တစ်ခု တည်ဆောက်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း
E-Learning အတွက် (၁၄−၈−၂၀၂၀)ရက်နေ့ဆုံးထား၍ ကျောင်းသား/သူများ Registration ပြုလုပ်ပေးပါရန်
1-20192MB Exam Result